Abalimi abaningi bangabathengi abanomdlandla weminduze enhle, benemibala ehlukahlukene ehlukahlukene. Izimbali eziqhakazile ziyaqhakaza kuye ngokuthi uhlobo lwama-hybrid, ukujula kokutshala, kanye nesilinganiso sokukhanyiswa kwesayithi. Uma unayo engadini yakho iqoqo lonke lama-hybridi ahlukene, isikhathi esijwayelekile sokutshala izimbali siqala kusukela ekupheleni kukaJuni bese kuqhubeka kuze kube sekuwa, lapho izinhlobonhlobo ziyaqhakaza, ngokunye kufakwe esikhundleni. Masifunde kabanzi ngemininingwane ngokutshala nokunakekela imibala enhle njengeminduze. Izinhlobo nezinhlobo zezitshalo zihlukaniswe ngezigaba ezingu-9. Futhi sizohlaziya amaphutha amakhulu abathandi balimi futhi sijwayelane novelties zokuzalanisa.
Izinhlobo kanye nokuhlelwa
Ngempela, kukhona okumele ukuxoshe ngomzamo wokuthola intsha futhi uziqhayise ngaphambi komakhelwane, ngoba inani lezitshalo ezihlukahlukene lifinyelela amagama angama-3 000. Kodwa-ke, inqwaba yezimbali zezimbali zikhumbula kahle ukuthi igama lezinhlobonhlobo zezimbali lizwakala kanjani, liqondiswa ngesikhala sombala bese uthayipha (isigaba). Ngaphezu kwalokho, ezinye zezindawo zokuhlala zihamba ukusuka ensimini kuya ensimini yemifino, okuthiwa i-incognito, ngokushintshaniswa. Ukuqala, ake sibheke ukuhlukaniswa kwezigaba:
Iminduze yase-Asia (A) - engenakuzithoba, futhi kule ndaba, ivame ezindaweni zethu kusukela esikhathini esidlule. Ehle ebusika, ube nezimbali ezincane ze-shades ehlukahlukene, ezivezwe engxenyeni yokuqala yehlobo. Abamele lezi zinhlobonhlobo abazwakali, yiziphi izinto ezithandekayo ezithandekayo zezimbali zokusika.
Ama-lilies ahlala isikhathi eside, i-longiflorum (LO) - eyona edume kakhulu kuzo zonke izigaba ezinikezwe.
Ama-Oriental hybrid, noma ama-orientals (O), nawo anakho iphunga eliphikisayo. Ngakwesokudla kubhekwa njengento enhle kakhulu kuzo zonke izigaba. Kuqhuma phakathi kokuphela kuka-Agasti no-Septhemba.
Iminduze ye-Tubular (T) - ethandwa esigabeni esiphakathi segceke, esinephunga elibukhali elibuhlungu.
Siqedile ukuhlukanisa izigaba, sidlulela ezinhlobonhlobo (ukuwela phakathi kwezigaba), ezihlala zigcwalisa izinhlobo ezintsha zeminduze (FROM FROM hybrids kanye nezinye izivivinyo zokukhetha eziphumelelayo). Ezinye zazo zinemibala exubekile, okuyizona ezihlonishwa kakhulu ngabaflorisi, futhi ayinalo ukunambitheka okubukhali okunjalo. Iphunga lembali yezimbali ze-libridi seliba mnene kakhulu.
Ama-hybrids ase-East Asia (OA) abhekwa njengabancane kunazo zonke, lokhu kungenxa yokuthi ososayensi abakwazi ukuthola inani elanele lamathambo. Inqwaba yesigaba esinikeziwe inezimbali ezibomvu ze-orange-obomvu nomngcele ophuzi noma omhlophe.
Kodwa ekuphumeleleni ukuzalana okungenakuphika kungenzeka ukuthi uhlukanise ama-hybrids, kanye nama-hybridi, i-LA, iqiniso, ekutshalweni nasekuhlaleni lezi zigaba kunenkinga ethile mayelana nalokho esisazoxoxa ngakho.
Kumele kuqashelwe ukuthi ekugcineni, ingxenye yesishiyagalolunye, iminduze eminingi yasendle iyasuswa.
Indlela yokutshala ama-hybrids?
Unyaka nonyaka, ikhwalithi ye-hybrid impahla engeniswe ezweni lethu iye yanda kancane. Okuthandwa kakhulu yi-lily. Amamaki akhe ayenamahle kakhulu futhi emuhle, futhi ukubanakekela akuyona into eyinkimbinkimbi njengoba kungase kubonakale kumuntu ongenamakhasimende. Kungani abanye abalandeli be-flora futhi bengasheshi ukuzala izinhlobo ze-hybrid, tubular noma zase-Asia? Yebo, bonke, ngoba sebehlanyele isibhamu esinjalo kanye futhi behlupheka nge-fiasco, bazikhethela ukuthi lo msebenzi uqobo kulabo abakhethiweyo. Umbuso owodwa olula kufanele ucaciswe: ukutshala izinto zokutshala kwi-bayonet yefosholo ukuze kuqinisekiswe ngokuqanda kungumqondo ongalungile ojulile. Izinhlobo ze-Asian kuphela zitshalwe ngokujulile, futhi kusukela ku-FROM ezinhlobonhlobo zaminduze, izinhlobo zezameli ezibulalayo nezindebe kufanele zifakwe enhlabathini ngokujula kuka-10-15 cm, njengoba, ngempela, kuboniswa emaphaketheni. Ezingqondweni zethu, umqondo weqhwa elikhulu lokushisa ubusika awunakwenzeka.
Kwenzekani ku-bulb uma itshalwe ngokujulile?
Impendulo yombuzo icacile. Lapho i-bulb ingcwatshwe ngokujulile, umbuso oshisayo uphukile phakathi nesikhathi sokutshala, okwenza buthakathaka isitshalo futhi kungavimbela izimbali noma kungabikho ngokuphelele le nqubo. Cabanga ngesithombe esinjalo: entwasahlobo, i-germ kumele idlule ekukhanyeni, futhi yachitha wonke amandla akhe ukunqoba ibanga elingama-25 cm, noma ngisho nangaphezulu. Khona-ke lesi sitshalo ngeke nje sibe namandla okuqhakaza, futhi isiqu esincane esincane sehlumela sizohlala singasebenzi yonke ihlobo. Ngakho-ke, iRoyal ye-lily (ebangeni) futhi idinga ukuthi i-bulb ibekwe ngaphansi kobubanzi buka-5-6 cm. Ngaphambi kokutshala, i-rhizome ye-lily inqunywa nge-secator. Lokhu kuzosiza izakhi ezisenhlabathini ukuba zingene ngokushesha ku-bulb futhi, ngokufanele, kungcono ukuyihlakulela. Kulungile, njengoba kufanele, ngokushesha emva kokubeka izinto zokutshala emhlabathini ochithe kahle.
Imifino yanamuhla yaminduze (Ukushaqeka, uRobin, Dallas), kanye ne-LA-, LO-, i-OA-nzalo kungatshalwa kokubili ekwindla nangentwasahlobo, ngoMeyi, lapho inhlabathi ivuselela ngokwanele. Izimbali ezitshalwe ezitshalweni zentwasahlobo zingalindelwa kakade kule nkathi. Yiqiniso, ungalindeli ukuthola ngokushesha inqwaba yezimbali ehlathini, kodwa abalimi bembali bayabantu abanesineke. Futhi bayayithanda kakhulu lapho izithelo (futhi kulokhu izimbali) zomsebenzi wazo zingalinganiselwa ngaphandle kokulibala isikhathi sonyaka esizayo.
Nini ukuyeka ukunisela?
Ngemuva kwezinyathi zase-Asia (izinhlobo ze-Aphrodite, iSphinx nabanye) ziyeka izimbali, kubalulekile ukusika isitshalo sokuvuthwa okungcono kwezingane futhi ukuze ngezikhathi zonyaka ezimbali zezihlahla zakhiwe ngokushesha emahlumela amaningana aqinile. Lokhu kusebenza ngokugcwele kwamanye ama-hybrid. Manje ungayeka ukunisela. Uma ukutshala kwezinhlobo ezintsha emhlabathini kuhlelwe ekwindla, i-bulb ayikwazi ukuphuziswa, ukuze ugweme umswakama owenziwe ngokweqile nenhlabathi, futhi ngenxa yalokho, ingozi yokukhukhula yanda.
Ungayigcina kanjani inhlanzi ebusika?
Abathandekayo abaningi bemifino yezitshalo bathenga futhi batshale iminduze yaseMpumalanga (Betty, Allegro, Aurora, Afrika, Imperial Gold nabanye) ngokulindela ukuthi isitshalo esingapheli sitshalo asidingi ukufakelwa nokugcina unomphela ebusika. Nokho, empeleni, lezi nzalo ziyakuthanda ukugcina ubusika obomile. Kulula nje, ama-bulb ekwindla kufanele aguzwe futhi asomiswe, futhi okusele kwesitembu kususiwe. Bese ugcina, njenge-gladioli, ekushiseni kwe +1 ukuya ku-+5 degrees endaweni emnyama (isibonelo, esiqandisini noma emiphongolweni yangasese).
Indawo yokuhlala enomile
Uyakhumbula ukuthi sishilo kanjani abaqoqi bangempela abaye bakhula izinhlobo eziningi zezinhlobo ze-hybridi engadini yabo ngaphezu konyaka owodwa? Ungaba kanjani labo abavuna iminduze efana namazambane? Kule ndaba, indawo ebizwa ngokuthi indawo yokukhosela eyomile ingasetshenziswa, lapho ifilimu ibeka phezu koqweqwe oluphezulu lomhlabathi , khona-ke izinto ezibonakalayo (sawdust, amahlamvu asomile, utshani) zifakwa endaweni encane. Futhi kuphela lapho ama-fir paws abekwe phezu kwe-mulch, emva kwalokho futhi isendlalelo sefilimu yokushisa. Okujabule kakhulu nale ndlela yokukhosela kuzoba ngama-asidi we-lily ase-Asian (okufana no-Miss Ellis, Amabha, Pixie, Black Drozd, Sorbet nabanye). Inhlabathi eyomile ngaphansi kohlaka lwendlaki ingafinyelelwa uma ifilimu ibeka phezulu ngaphezu kwebhubhu ngokushesha ngemva kokuphela kwesikhathi sokubhakabhaka. Ukuze umswakama oqoqiwe kule ifilimu ngesikhathi sekwindla isikhathi eside semvula, kunezinhlobo zokuhlukanisa emgqeni. Ngakho-ke, inhlabathi ngaphezu kwebhulethi ihlale isomile futhi ngeke ikwazi ukukhanda, ngisho noma ukujula kwe-bulb kungamamitha ayi-10 kuphela. Ifilimu, izinto ezibukwayo kanye ne-lapnika zenza ukuvikeleka okwengeziwe kwesitshalo. Leyo ndlela yokukhosela iyakwazi ukuvikela iminduze (izinhlobo, incazelo kanye nezincomo ezijwayelekile esizicabangile kulesi sihloko) nakusuka ku-frosts avamile.
Ngentwasahlobo, izingqimba zefilimu kanye nethebhulazi zingalahlwa ngemuva kokuba iqhwa leqhwa lidlulile. Ungavumeli inhlabathi iphume ngaphansi kwelanga eliqondile. Kodwa-ke, kusukela emaqanda futhi ukuze avele ngokushesha amahlumela ayifunayo, embhedeni ngamabilisa afaka ama-arcs, lapho afaka khona izinto eziqinile. Isitoreji esinjalo sizosindisa ukushisa, uthole amahlumela okusheshayo, futhi uvumele umoya ngaphakathi kokushisa okushisa okungahambi kahle ukuze kuhanjiswe ngokukhululekile.
Izinhlobonhlobo zemifino zivuselelwa njalo
Uma ukucabangela impumelelo yokukhethwa kwansuku zonke, i-lily (i-StarClass, iSiberia, i-Optimist) ngokunyuka kwama-frost ukumelana kungafakwa. Lezi nzalo zasempumalanga ziyakwazi ukugcina ubusika ngokuphelele ngaphandle kokuthiwa indawo yokuhlala esomile. Ukunakekelwa okukhethekile kufanele kuhokhwe kuma-hybrid okukhethwa okusha - LOO (empumalanga eside). Ama-big-flowered bulbs awela nge-long-flowered futhi athola "ama-gramophones" amakhulu kakhulu afinyelela ku-40 cm ububanzi. Isibonelo esiphumelele kakhulu yi-lily (ezihlukahlukene ezibukhali) zombala omhlophe. Ngoba ubusika udinga indawo yokuhlala eyomile enezingqimba ezingaphezu kwezingu-30cm.
Kungani izinhlanzi zasempumalanga zingabhubhisa isizini esilandelayo?
Izimbali zeMpumalanga ziyaqhakaza ekuphendukeni kokugcina, kakade ekwindla. Kubalulekile ukuhlala entwasahlobo ngokutshala nokutshala u-anyanisi, sengathi, ekupheleni kukaJuni, kanti lesi sitshalo sizokhula ngo-Okthoba kuphela. Futhi uma ama-frosts asevele ewa ngasekuqaleni kukaNovemba, khona-ke isibhamu ngeke sibe nesikhathi sokubuyiselwa. Yingakho kudingekile ukuqapha isikhathi sokutshala ngokuhambisana nesikhathi sokuqhakaza kwe-hybrid futhi silindele isikhathi sokuphumula esincane ngaphambi kokuqala kwebanda. Le "holide" esitshalweni kuyadingeka ukuze uthole amandla ngaphambi konyaka olandelayo futhi ngesikhathi kufanele kuthathe okungenani inyanga.
Okuncane mayelana nezinambuzane
Sifake kuhlu hhayi zonke izici ezivimbela izimbali zama-bulb. Asizange sisho izinambuzane eziningi ezikwazi ukubhubhisa ubuhle obukhazimulayo. Ngesikhathi sehlobo kuyadingeka ukulandelela amahlumela amabi, ama-gnarled, ama-curve namabala emagumbini futhi ngesikhathi sokuzihlukanisa. Izilwane ezibalekelayo zikhomba isifo segciwane esithinta inhlabathi noma i-bulb. Ukuhlabela isitshalo esisodwa kungaba ukuvikela ama-specimens asele. Inhlabathi lapho isitshalo esinegciwane elihlala khona lingelashwa kangcono ngekhamikhali yamakhemikhali eyenzelwe ngokuqondile ukutheleleka kwegciwane lesandulela ngculazi.
Isifo esinjenge-bulbous rot sibonakala ngenxa yokuntuleka kwemithombo yamanzi, ukuqhuma komswakama ku-rhizome, kanye nokungena emgodini lapho utshala umquba owanele.
Kubalulekile! Awukwazi ukutshala iminduze endaweni lapho ama-tulips asetshenziselwa ukuhlala khona ngenxa yokubheka okukhulu kwegciwane lesandulela ngculaza kuleso sifo esiyingozi njenge-variegation.
Ngakho-ke, sifunde ukuthi ama-hybrids of iminduze ayithandi ukuba atshalwe ngokushelela okuhle, futhi nokuthi izitshalo zikhethwa ubusika ngaphansi "indawo yokukhosela eyomile". Sathi ama-hybrid ase-Asia ahambisana kakhulu nezimo zokuba khona kwendawo ephakathi yaseRussia kanye nezifunda zaseNyakatho. Futhi wafunda ukuthi izinhlobo ezintsha zezinhlamvu zihlale zigcwaliswa.
I-Belfry eluhlaza okwesibhakabhaka - ukuphela okungapheli kokuhlelwa kwesibili
Nethezeka ku Omsk esifundeni. Nezokungcebeleka isikhungo in Omsk Region
Dennis Avner futhi iphutha lakhe ebulalayo
"Armata" - Tank iphupho Russian Ground Amandla
Kanjani ukuqala ukunciphisa umzimba - ne kahle, incazelo kanye nokubekwa!
Vincci kuyona Taj Sultan (Hammamet, Tunisia). Izithombe kanye nokubuyekeza
Vasily Belov, "Lad": isifinyezo
Retinol isikhumba - izici ezibaluleke